Munamato weVana. ? Ropa raKristu uye neMweya Mutsvene
Munamato weVana. Ivo ndiyo chikonzero chemufaro wakasimba uye neshungu dzinogona kunzwa chero munhu. Ichi chikonzero nei kusimudza a munamato wevana kune Ropa raKristu neMweya Mutsvene chimwe chinhu chakajairika.
Kubva panguva yatinoziva kuti varipo, moyo yedu izere nezvinotinetsa uye zvekunzwa izvo zvinowanzoomera kutsanangura.
Kudurura zvese izvi zvine chekuita nemunamato ndicho chinhu chehungwaru chatingaite isu sevabereki apo tinopa kumwe kushushikana kana kunetseka zvakanyanya.
Parizvino, apo njodzi dzinoratidzika kunge dziri kurongeka kwezuva uye uko vana, kunyanya vari padanho repwere, vanoita sekunge vasingaone zvese zvisina kunaka zvakashata munharaunda.
Ichi chikonzero nei, kure nekurambidza izvi kana izvo, izvo zvaunofanirwa kuita, kunze kwedzidzo yakanaka, kutora nzvimbo yedu padyo nemunamato.
1 Munyengetero weVana Munyengetero une simba here?
1.1 Namata kune Ropa raKristu kuvana
1.2 Munamato kuMweya Mutsvene wevana
1.3 Munamato wevana vanopandukira
1.4 Namata kune Ingirozi dzevana
Munyengetero weVana Munyengetero une simba here?
Vazhinji vavaverengi vedu havazivi kana minamato ine simba.
Ivo vanozivikanwa kuva vane simba, kunyangwe vane masimba masimba.
Minamato yedu Iwo ndowokutanga.
Vanobvisa kubva muBhaibheri, nzvimbo dzeChechi yeKaturike uye nzvimbo dzekuvimba.
Ose akasimba uye anoshanda.
Naizvozvo, kana iwe uchida munamato une simba weVana, iwe unotoziva kuti une 3 pazasi. Namata uine kutenda kukuru. Kugara uchitenda musimba raMwari. Nenzira iyoyo hazvifanirwe kukundikana.
Namata kune Ropa raKristu kuvana
Ishe, Baba Vemasimbaose, tinokutendai nekutipa isu vana.
Iwo mufaro kwatiri, uye kunetseka, kutya uye kupera simba zvakadhura isu, tinovagamuchira nerunyararo. Batsirai kuti tivade nemoyo wose.
Kubudikidza nesu makaunza hupenyu kuhupenyu; Kubva pakusingagumi vese iwe waivaziva uye uchivada.
Tipeiwo huchenjeri kuti tivatungamirire kutsungirira kuti vavadzidzise kusvinura kuti vajaire kune zvakanaka kuburikidza nemuenzaniso wedu.
Munosimbisa rudo rwedu kuti ruvarange uye muvaite nani.
Zvakaoma dzimwe nguva kuvanzwisisa kuti vave sezvavanoda isu, kuvabatsira kuita nzira yavo.
Tidzidzise Baba vako vakanaka nehunhu hwaJesu Mwanakomana wako naIshe wedu.
Wakafarira here munamato kuRopa raKristu kuvana?
Kutaura kuti Ropa raKristu richiri kuyerera pamuchinjikwa ichokwadi icho vazhinji vanotemba kusahadzika.
Nekudaro, iropa iri rinoramba riripo zvinoshamisa nenzira huru uye kwete Izvo zvinoshanda chete mukuchenesa zvivi zvedu Izvo zvinogona zvakare kutibatsira kugadzirisa chero mamiriro ezvinhu anomuka uye nezvimwe kana ari evana vedu.
Jesu, semwanakomana akanaka, anoziva uye anonzwisisa zvese zvinogona kupfuura nevana, nguva dzese dzavanogona kuyedzwa kuti vaite zvinhu zvisina kuvanakira uye zvavasingazive kana vasingade kuona.
Ndezve zvese izvi kuti kukumbira kuti ropa rechikumbiro chakakosha chevana rine simba, pamusoro pekutipa rugare rwakakodzera kumirira chishamiso, tinogona kuzorora kuti zvichatibatsira uye nekukasira pane gare gare tozoona zvatinokumbira.
Munamato kuMweya Mutsvene wevana
Ishe, vhenekera pfungwa dzevana vedu kuti vazive nzira yawakavashuwira, kuitira kuti vakupe kukudzwa uye vasvike pakuponeswa.
Vabate nesimba rako, kuti vakurudzire muhupenyu hwako zvinangwa zveHumambo hwako.
Tivhenekereiwo isu, vabereki vako, kuvabatsira kuti vazive basa ravo rechikristu uye kurizadzisa nenzira yerupo, vachibatsirana nekukurudzirana kwemukati.
Jesu paakakwira kudenga akatisiyira kuMweya Mutsvene kuti ave kambani yedu nekusingaperi mazuva ese kusvika adzoka.
Hapana mumwe anotiziva kupfuura iye, kunyangwe isu pachedu.
Patakanetseka, takazvizarura, pataichema nekuda kwemwanakomana, Mweya Mutsvene aivepo achitichengeta kambani uye aive achitarisirawo mwanakomana iyeye kunyangwe ari kupi.
Ngatimubvunzei nekutenda uye tine chivimbo kuti achatibatsira uye kuita kuti zvese zvitore nzira yaanofanira kuve nayo, munguva pfupi kupfuura yatinotarisira.
Mwari wangu, ndinokupai vana vangu; Mukavapa kwandiri, ndezvenyu nokusingaperi; Ndinovadzidzisa Iwe uye ndinokumbira kuti uvachengete kubwinya kwako. Ishe, dai udyire, chishuvo, zvakaipa zvikasa kukutsausa panzira yakanaka.
Kuti ivo vane simba rekuita vachipesana nezvakaipa uye kuti vavariro yezvavakaita nguva dzose uye yakanaka chete.
Kune zvakaipa zvakawanda munyika ino, Ishe!
Munoziva kusasimba kwedu uye kuti zvakaipa zvinowanzotinakidza sei; asi Iwe unesu uye ini ndinoisa vana vangu pasi pekuchengetedza kwako.
Vapei mwenje, simba uye mufaro Pasi rino, Ishe, kuti vagararame Iwe pasi rino; uye kuti kudenga, pamwechete pamwechete, tinogona kunakidzwa nekambani yako nekusingaperi.
Kupandukira muvana ndechimwe chinhu chatinogona kutanga kuona kubva paudiki uye ndiyo panguva iyoyo kwaunofanira kutanga kumbira rubatsiro kuti utumirwe kwatiri kubva kudenga.
Nguva zhinji isu sevabereki tinoda kero kuti tizive zvekuita uye zvsingaitwe kuitira kubatsira kumukira kwevana vedu haina kunyanya kuipa.
Raira mu munamato wevana vanopanduka, kubva kumweya kuti tikapihwe huchenjeri nemazano akanaka kuvana vedu ndizvo zvatinogona.
Namata kune Ingirozi dzevana
Vanodiwa Baba naIshe wedu, ropafadzai munamato uyu neRudo rwenyu infinito zvekuti painosiya miromo yangu ne simba zvisingakanganiswe nemoyo wangu, ako ese mauto ekudenga anopindura kufona kwangu nekupa vana vangu chero chavanoda pakuchinja kwavo uye mufaro.
Fukidza uyu munyengetero wemwoyo wose neHupo hwako uye usarega zvakaipa kana zvikanganiso zvangu zvichizvibvisa. Shamwari inodikanwa yaMichael Michael Ndiri kukudaidza muzita raIshe kuti utore vana vangu uye uvadzivirire nebakatwa rako kubva pane zvakaipa zvese.
Dura izvo zvinokanganisa uye zvisungo zvavo, vasunungure uye uvape kutenda kwakasimba kuti varege kubuda munzira yakanaka. Mudiwa ngirozi huru Jofiel Ndiri kukudaidza muzita raIshe kuti upfure vana vangu nechiedza chehungwaru.
Vabatsire kuvandudza matarenda avo uye kugona kwavo, vadzise parutivi pane kukanganisa, zvakaipa uye kusaziva. Vakurudzire kuti vadzidze uye vagare vakunda uye vachenese nzira dzavo kuti vakwanise kuzadzisa kushandira kwavo uye vafare pasi.
Shamwari Yekudenga Ngirozi Chamuel Ndiri kukudana muzita raIshe kuti uzadze vana vangu nerudo, poresa mwoyo yavo uye uvatenderi vazive rudo rwechokwadi uye varwo.
Vabatsirei kurarama mukuwirirana nezvose nyika uye muvape kugona kuve nemutsa uye kuda vasingatete kana kufurirwa nezvakaipa.
Dai Chiedza chinopenya mumweya yavo chisambodzima. Saka ngazvive maropafadzo emhuri yedu uye nembiri yaMwari narinhi narinhi.
Zvinonzi munhu wese munyika ane ngirozi yakapihwa, asi zvakafanana hazvitaurwe nezvevatumwa vakuru uye kuti ivo ndevane rimwe chinzvimbo chepamusoro mune uto rekudenga.
Tinogona kuzvishandisa chero nguva yekushayiwa.
MaWarriors, varwi uye shamwari dzedu, Vatumwa vanogara vachida kutibatsira kurwira hondo idzo dzatisina simba.
Kana vari vana hapana chinhu chiri nani kupfuura mumwe wavo kurwira kukunda munharaunda ipi neipi inodiwa nemwana.
Iwe unogona kutaura mitsara mina pasina matambudziko.
Munamato wevana kuRopa raKristu, kuMweya Mutsvene uye kune Vatumwa vanongoshanda chete kuchengetedza nekuparadzanisa vana kubva panzira dzakaipa.
Nekudaro, iwe hausi kutya kutaura mazwi ese ari muchinyorwa chino.
Chinhu chakakosha kutenda musimba raMwari uye uve nekutenda.
Namata usingatyi, iwe uchamhanya zvakanaka.